Mudzimai wangu vakafamba kana Estonia
Ichi chimwe chezvinhu kuziva Mwari zvinoisa, sezvo ini ndamboita kuburikidza.
Nhasi wa25 gore chikepe Estonia akaenda pasi Sea reBaltic. Tichifunga izvi, ndinoda kugoverana nemi uchapupu Estonia njodzi yangu kubva chitsauko chebhuku mudiwa wangu zvinoshamisa chakarebesa usiku.
Nhasi ndiwo makore 25 kubvira Estonia akanyura, uye 852 vanhu vakarasikirwa noupenyu hwavo. vanhu 137 chete vakapona.
The mufambi chikepe M / S Estonia akaenda pasi neGungwa reBaltic September 28, 1994 panguva yaro rwendo kubva Tallinn kuna Stockholm.
Paiva 989 vanhu mungarava, uyo 852 vakafa. Izvi, kuti 501 yeSweden. 51 Swedish vakapona. Sezvo vose vakapona 137 vanhu.
Estonia njodzi ndiyo kupfuura ngarava munguva yorugare kumboradzikwa Nordic mumvura. Uyewo mumwe kwati sezvo nomunhu chakaitika mukunopera 1900s.
The rwendo kuenda Estonia
Kubva mubhuku rinonzi The wakarebesa usiku Christer Åberg.
Chaiva chinhu kuti aifanira kuitika, kana kuti, chimwe chinhu kuti hazvina kuitika kumusangano mukuenderera Tranas aigona kutora nzvimbo. Uye ichi ndicho mumwe kupfuura kuziva Mwari zvinoisa, sezvo ini ndamboita kuburikidza.
Mushure ndaibatanidzwawo ndiponeswe, ndakaenda gare gare muzvikoro Bhaibheri maviri. chikoro The Bible wechipiri waiva Jönköping Church Pentecostal. The ainzi pfupi, Pentecostal Bible College uye Pastor Leif Svensson aiva chikoro mudzidzisi musoro. The chikoro vaiva chaizvoizvo Viebäcks kukoreji uye yakatora kwegore. Zvakanga kukosha kwandiri.
Sezvo ndaiva chivimbo chikuru Leif Svensson, ndakachengeta nekuonana naye pashure chikoro yapera kwandiri. Ini ipapo kushandiswa kumudana ikozvino uye ipapo. Pane imwe nguva yakadaro akaudza Leif kuti akanga ari yaimbova Soviet Union uye kuparidzwa nezvaJesu. Vanhu vazhinji vakanga vagamuchira Jesu uye vakaponeswa mumisangano, uye angadai zvachose zvakazonaka.
Chitsitsinho mwoyo wangu. Ndinoda kuva, mhere mupfungwa dzangu. Asi ndaisazombofa nguva kuenda Soviet Union. Vamwe nguva pashure yedu kukurukura ichiputswa ari yakakura umambo.
Pandakatanga wakazonzi Leif, akandiudza kuti vaizova guru chirongwa wechiKristu aimbova yechiKomonisiti palace Latvia raMwari guru, Riga. Akabvunza kana ndaida kubatana, uye ndaida kuti, chokwadi. Zvakanga zvakare zvachose tarenda: Vanhu vazhinji vakaponeswa uye inoshamisa vazoporeswa siyana zvirwere sJags.
Zvaisazova vakazova kechipiri rwendo Riga. Izvi nguva misangano hombe mitambo horo. Zvose mishandirapamwe akasiya zvikuru mupfungwa dzangu uye ndaida kuti kubatanidzwa zvakawanda zvinoshamisa zviitiko zvakadai mune ramangwana.
Church Pentecostal muna Ljungby vakahaya dzakawanda dzokugara uye ikozvino ndakava nenguva vaigara mariri avete pamusoro. Rakanga chakakura, imwe atiki ane raiiswa sirin'i uye skylights. Rakanga yakafarikana uye elongated zvikuru kicheni uye alcove yakanga chaizvoizvo ndangofanana kamuri duku. Ndainakidzwa saizvozvo tsime mufurati, iro kunyange aiva diki nhurikidzwa. Kana ndakamira pamusoro muvharanda, ndakava yakanaka maonero yemapurisa, yaiva pedyo.
In huru oblong kicheni, apo ndaiva yangu tsvuku akasungwa pafoni, ndakadana rimwe zuva kukwira Leif Svensson. (Uyu pamberi cordless dzeserura uye maserura 'nguva.) Paakaudzwa Leif Svensson kwandiri:
"Tiri kuva chirongwa chikuru guru Estonia. Tichaenda ikoko huru mutakurwi chikepe kubva Stockholm. "
The chitsitsinho zvakare kuti mwoyo wangu. Ndinoda chaizvo vanoda kuuya pamwe. Ndaiziva kuti zvinoshamisa zvingava nokuti ndakanga muzvirevo mishandirapamwe maviri. Asi ndaiva nedambudziko guru. It nesipereti mari iri.
"Ini ndinoda chaizvo vanoda kuuya pamwe," ndikati kuna Leif, zvishoma zvinosuwisa uye resignedly. "Asi handigoni kutenga rwendo. Ini kungorega havana mari. "
Sezvo ndakanga panguva ino akanga asingashandi, ndaigara pamusoro varikumahombekombe. Ndaisazombogona ini kugutsa chinhu yokuwedzera. Ndakagamuchira mari kubva inishuwarenzi urovha, uye zvakanga zvakakwana chete kune shoma zvakakodzera. Ini, aiva ose mavhiki matanhatu Zvisinei, nokuda kwechimwewo chikonzero, zvishoma mari. Zvakanga zvakafanira kuti countervailing chinhu, izvo Handina kumbogara kuzvinzwisisa. Apo Leif akaudzwa kuti ndaisagona mari, akati achiri kutenda utano
"Hapana dambudziko. Isu acharonga kuti. Imi makakohwa rwendo isingadhuri zvikuru, uye vamwe vasingazivi. "
Imhaka nzendo idzi kuti "vanhuwo" aigona kutevera. Vakabhadhara kuti matikiti pachavo, uye saka vakakwanisa kubatsira nenzira dzakasiyana-siyana pamisangano. Vaiva pakati vamwe kuva uye kunyengeterera vanhu, kazhinji vamazana, vakanga vakwira uye aida vaponeswe. Kana izvi munhuwo yeSweden akanyengetererawo vanhu vairwara, vakaporeswa. Uku kwaiva chaizvo kutenda: Mumwe apinda nemamwe mazwi, kuva chaizvoizvo apo Jesu zvishamiso uye zvishamiso: Uyewo, iye zvino ndava kuziva kuti Leif Kirasi Bhaibheri kuti kutevera uye kuitawo mushandirapamwe. Nenzira iyi, vakatora yakasiyana wokuti zvavakanga vadzidza kuchikoro cheBhaibheri. Vangadai nemaziso avo kuti vaone kuti zvakashanda kutenda muna Jesu.
Leif Svensson vakaedza chaizvoizvo kuti kushambadzira zvakanaka rwendo, saka kuti ndaikwanisa kutevera. Akandiudza kuti zvakanaka danidziro kwaizova uye sei zvinoshamisa kungava kuenda mamiriro unyanzvi mutakurwi chikepe kubva Stockholm kusvika Tallinn. Tingadai kugara dzavo cabins mungarava uye ndaida ikozvino kuwedzera ikoko. Tisati akagumisa kurukurirano Leif akavimbisa kuti avafadze ruzivo pamusoro chirongwa uyewo akanaka bhurocha pamusoro youmbozha uye kunokudzwa mutakurwi neposvo. Mazuva mashoma mushure kukurukura zvandakanzwa yokutandarira rangu guru sei yakarovera panhurikidzwa tsamba slots pasuo rangu, uye thud chinhu yakawira pamusoro horo pauriri. Ini Vakamhanyira yangu? Kết kusvikira The musuo yakachena kuona kana zvakanga pambiru yakanga yasvika. Hongu, pane zvakanga pamusoro doormat. Ndaida kuona kana tsamba mashoko pamusoro kuEstonia rwendo yakanga yasvika. All dzimwe tsamba tsamba, magazini uye kushambadza yakanga nguva ino haana anonakidza zvikuru. To Ndinofadzwa, ndakawana hombe shava hamvuropu pamwe Leif Svensson sezvo yatumira.
Ini akabvarura zvisvundu hamvuropu pamwe indekisi yangu munwe sezvo neapo tsamba banga, kudzura zviri akawana zvishoma amateurish akaita mashoko pamusoro kuEstonia rwendo kuti Leif akanga atumwa kwandiri. Meso angu vakakweverwa Nekukurumidza yakaisvonaka, achigamuchira bhurocha pamusoro guru hwokusanyara mutakurwi chikepe kuti zvaizotora nesu Estonia.
Ndakadzidza chikepe kwazvo uchinakidzwa anopenya. The kadhi akatorwa Tsanga yacho yaichekwa kubva kumusoro. The chikepe kwakanga kure uye rakapamhamha pakange kufamba yebhuruu gungwa refu chena zvimba shure. Ko kana ndaigona kuenda. Chii rainakidza zvaizova, munzira dzakawanda.
Hongu, chaizvo ndaida kutevera, asi kurwadza mupfungwa dzangu kana chete ndakayeuka zvoupfumi ezvinhu ndakazviwana mu. Ndinofanira kuitei? Zvakanaka, zvichida chii Ndaigara kuita kana ini akamhanyira dambudziko kana aida chinhu: Nyengetera kuna Mwari. I wakakotamira nekuti namabvi angu nokuda pamubhedha muimba duku, waiva alcove rangu, uye akanyengetera kuna Mwari muzita raJesu. Ndakamukumbira kuti andipe mari inodiwa parwendo. Uye pamunonyengetera kuna Mwari kuti mhinduro munamato - nenzira imwe kana mumwe.
Ndakanzwa vakaroorana vakura vechiKristu vari shamwari dzangu. Mazita avo aiva Rute Berndt uye aiva rinozivikanwa Hardware chitoro nechepakati Ljungby. Zvino zvino, ini aiwanzoshanyira navo. Ndainzwa ndakasununguka pakati pavo. Haamiriri akanga Ndakaramba kupinda apo ini pamba yavo. Zvino zvakaitika kazhinji.
Vakararama pedyo mvura neshongwe, yaiva pachikomo chete pamusoro pakati. Zvakatora maminitsi maviri kuti kufamba Brick imba yavo shava. Pandakaenda shamwari idzi yakandikumbira nguva dzose kofi uye mabhisikiti apo isu agere zvisvundu pasofa huru yakanaka yokutandarira.
Tinoda Kazhinji mavhidhiyo echiKristu pamwe chete. Panguva ino, zvakatora achiri vcr kana ungada kuona mafirimu pre-akanyorwa paterevhizheni. Ruth uye Berndt chaizvo rine mafirimu vechiKristu kubva dzakawanda dzakasiyana mishandirapamwe uye misangano munyika. The mafirimu vaiva anonakidza uye vakanga vane mukurumbira vakurukuri. Zvino akamuka zvokunamata uye mumuviri zvose upenyu kana iwe ikoko. Takataura Ichokwadi nezvaJesu, uye pamusoro ezvinhu Sweden pakunamata.
Ruth uye Berndt nguva dzose aiva mugove kuudza uye ndichibvunza nzira. Ndaifanirawo yakawanda mwoyo, saka zvingadai Kazhinji kuva kunonoka patakasangana. Takava tose vatatu zvinoodza kurasikirwa uchiongorora nguva. Saka hazvishamisi kuti kazhinji vakanga vava usiku ndisati kufamba kumba. Ndakanga nguva dzose vakagadzirira refu nousiku pandakashanyira navo.
Mumwe manheru nguva imwe kushanya kune Rute Berndt. Ndakafamba kubva furati wangu chechi yePentekosti, akayambuka chitima chezvitima, akafamba mhiri kwemugwagwa uye ipapo neta vachikwidza makata refu chikomo. On pegomo Ndakatendeuka kujaira kubva mvura shongwe akatarira kurutivi mumugwagwa zvakazoita kuti imba yavo, vakakwira pfupi ibwe matanho uye ainzwika bhero.
Just akazarura musuo akakwazisa ini senguva dzose welcome yakatarwa. Senguva dzose, ndainzwa nguva ino noushamwari neshamwari dzangu. Aiona zvakanaka kuva navo. Sezvo ndakanga ndichiri oga panguva ino, zvakanga kukosha kwandiri kuti wakanaka shamwari dzechiKristu kuti kushamwaridzana.
Isu akagara, senguva dzose, pasi muimba yokutandarira TV pasofa, akatanga kukurukura, mafirimu, akataura, vainwa kofi, mafirimu, akataura ... In pfupi, chii taigara aisiita patakasangana, uye maawa akabhururuka senguva dzose kure.
Pane imwe nguva mugore manheru refu, ndakatanga kutaura pamusoro rwendo, sezvo ini saka zvikuru vaida kuenda mberi.
"Vandaimboshamwaridzana Bhaibheri mudzidzisi pa Bible School Pendekosti muna Jönköping, Leif Svensson, achaita mutsva danidziro wokuEastern Europe", ndakaudza Rute Berndt.
"Nokuti Latvia zvakare?" Akabvunza Berndt apo akanwa chiduku sveta kofi uye rikamunya muchindwi nechingwa.
Akanga pakarepo kufarira nokuti aiva nehanya zvikuru kuvhangera mune dzimwe nyika, kunyanya kuEastern Europe. Vhidhiyo flickered dzavo paterevhizheni, asi zvino kwakanga pakarepo hapana wedu vaifarira mariri. Kuuya rwendo vaiva pfungwa, uye vakanga vabata shamwari dzangu 'nzeve. Vaiziva kuti ndakanga ndaita marudzi aya nzendo kare uye vaiziva sei zvikuru yenzendo vakanga zvaireva kwandiri.
"Kwete, Tallinn muEstonia," ndakapindura pana Smitty mubvunzo. "Richava kukuru kumutsidzirwa nokutamburira anion iyo, saizvozvo sezvo danidziro Ndakanga pamusoro mu Riga."
"Chii mafaro" tabbed Ruth ari apo pakundidira zvimwe kofi mune mukombe wangu chinhu. "Uchaita kuuya?" Akabvunza, vakabata panguva iyoyo kusvikira keke ndiro kwandiri kuti ndaizova kutora kunyange keke richangobva akadururira kofi.
"Ndingada chaizvo kundiona," Ini ndikati, "asi panova snag. Ini kungorega vasina mari zvorwendo, saka handigoni kuuya kuenda. "
Ndakafunga handina chaizvo nekuti kana ini nezvayo pakupedzisira. Vaviri ava vakanga kureva mazimari. Vakatora yakakurumbira uye chitoro muna Ljungby. Asi isu akashandiswa kutaura pachena zvose, saka naizvozvo aitova hapana achipemha yangu chikamu.
Takaramba kutaura zvose, asi kana bhero vakanga vava hafu apfuura gumi, ndakafunga zvakadaro kuti yakanga nguva kugumisa Community yedu. Nyaya akaramba kwekanguva pamusuwo tisati pakupedzisira kuparadzaniswa.
Ndakapinda pasi rurefu chikomo uye samazuva ose akanga maonero huru pakati murima. Streetlamps, dzimba nezvitoro zvakanaka dzakavhenekera murima panzira kudzokera furati yangu pakati muguta mabhaisikopo uye pechiteshi chechitima.
Pataipedza vakagovana kuti usiku vaifunga Berndt pane zvandakanga vaudzwa pamusoro Estonia rwendo. Kana ndaida kuenda parwendo, asi handina kuwana mukana nokuti nokushaya mari.
"Kana Chris anotikwazisa zvakare pamberi rwendo, Ndichakupfuurai kumupa mari," akakurukurirana Berndt pachake.
Pfungwa idzi zvandaiziva kosi hapana pamusoro. Berndt vakandiudza zvikuru gare gare kuti akanga achienda kundipa mari inodiwa, kana ndichidzoka pamberi rwendo. The chinoshamisa ndechokuti handina.
Iri raiva duku chikamu chomweya uye kutungamirirwa naMwari zvakajeka. Ndakanga akumbira mari zvorwendo, asi ndakanga akakumbirawo mudzimai. Mwari akanga achishanda zvino kuitira kuti nokukurumidza ndinoda vane mukana mhinduro kumunamato.
Panguva ino ndakaudzwa kuti mabasa. Ose vhiki nhanhatu, ndaifarira kuti zvimwe mari kubva inishuwarenzi urovha, uye ikozvino nguva zvakare. Izvi ndakanga ndakanganwa zvachose, asi kana ndiri pamwe indekisi rangu munwe mutswe kuzarura hamvuropu kubva inishuwarenzi kwemabasa, ndakaona kuti vakanga vakaiswa imwe mari panguva ino. Pakarepo ndakava pachangu mari kuenda Estonia.
Asi chinhu chakanga chaitika mupfungwa dzangu. Kufarira kuenda muEstonia akanga asisipo. Rakanga zvimwe anyangarika apo Ndakamirira. Rakanga chaizvo chinyararire mumoyo wangu Zvaainge muna Tallinn. Ndakanga zvachose hapana chido zvakare kuenda Estonia.
Ndakaudza shamwari yangu Tomas, wakandibvisa kuti chechi yePentekosti uye akunda ini Jesu, zvino ndakanga imwe mari yacho. Aiziva kuti ndaida kuenda kuEstonia, asi kuti upfumi hwenyika akaisa akataura vhiri.
"Asi zvino kuti kwaMwari kuti unofanira kuenda!" Iye akati nomuzvarirwo pandakamuudza nhau mari. Handimbofi ndakakanganwa mhinduro yangu kana ndaizviruma grimly, asi nechivimbo zvikuru akati:
Ndaisamuziva vanoziva zvandakareva. Wakauya sezvineiwo mumuromo rangu nemiromo. Pano Ndakanga kutamburira uye akakumbira kuti vabvumirwe kuenda Estonia. Pandakawana ndawana mukana Ini, akati akanga asina kwaMwari.
Zvino pashure ndinonzwisisa kuti zvakanga zvisiri ini ndiani akataura. Rakanga Mweya akanga ataura kubudikidza neni. Kuti varege kurega "womudzimu" kana cocky, I Zvisinei toned pasi, kuti zvishoma nokuwedzera:
"Handisi kunzwa izvozvo."
Ndakafunga akaridza zvishoma kupfuura kuva zvakadaro cocksure. Asi pashure okuti nyaya chakakurukurwa magumo. Thomas kumbotaurawo mamwe chinhu - uye handi kana. Chimwe chinhu chakanga chaitika mupfungwa dzangu pamusoro chirongwa muna Tallinn. chido changu rakaputiswa zvachose kure uye ndaisakwanisa kuzvinzwisisa.
Ndaifamba asiko iyoyo, uye ndinoonga nokusingaperi. Mushure maizvozvo, ndinoziva kuti Mwari ndiye akanga akanditungamirira chokupiwa nzira nenzira iyoyo.
Mumwe mukadzi wechiduku Linkoping, mwedzi mishomanana vaduku kupfuura ini, uyewo ndakafunga kuda kuenda chete rwendo. Mukadzi uyu akanga, kusiyana neni, akura mumhuri yechiKristu. saka akaponeswa uye akanga vakakwanisa kushanda sezvo muvhangeri iri yeko. Makore mashomanana akanga apfuura akanga asangana naJesu kuti kuvandudzwa uye ikozvino airarama vanzi upenyu kuna Mwari.
Dzimwe shamwari dzake vakanga kwenguva refu nguva vakaedza kufurira naye kuti vabatane nesu pamusoro ichi rwendo chinoshamisa uye zvarisingazivi sezvo zvaizoreva kuuya Estonia. Asi haana kuziva kuti chokwadi sei iye aizoita. Aizozviita kutevera kana kwete? Akanga chaizvoizvo mupfungwa miviri yavo nemakamuri maviri mufurati Linköping.
On patafura yake unodziya kicheni aiva chaiwo chete machira parwendo musha neni. Akanga Chokwadi kopi akanaka bhurocha pamusoro dzakaisvonaka mutakurwi liner, izvo akaratidza zvikuru chikepe pamusoro yebhuruu gungwa pamwe chena mukai shure.
Ikoko, muna kwake furati, aiva nemasimba zvose pakuzvichengetedza uye naMwari. Aigona sei kuita?
Papera nguva pfupi, ndakanga pasi pakati uye akaita nyaya. On munzira kumba manheru, ndinorangarira nayo saka zvakanaka, ini ndakafamba kare newsstand. Kunyanya mumwe misoro yakanga muchibudisira kubva vamwe, ndinofunga raiva pakati vatatu. I nechimbichimbi zvishoma kutsauswa izvozvo Ndakapfuura ari kiosk. The mumapepanhau, zvakanga nemabhii makuru dema: "Ferry akanyura kuBaltic usiku - pamusoro 800 vakafa"
Pasinei vanotyisa uye zvinotyisa löpsedeln, saka ini akaona izvozvo nepaburi. Pamwe nokuti ndakafunga kuti zvakanga zvisina zvachose akandibata, uye nguva dzose zvinoitika kumwewo uye kwete "pano". Uyezve, ndakafunga isiri pfungwa, kuti hazvina tinzwe kuSweden, asi vamwe vanhu uye nyika. Kangani kuita vanhu uye ndakanga ndisiri zvishoma zvakasiyana iyoyo. Apo tsaona uye njodzi, nguva dzose mumwe munyika. It hazviitiki muSweden uye kunyange zvishoma hanya ndiri nezvazvo. Strange pfungwa, asi zvinogona zvinosuruvarisa kuva.
Mangwanani akatevera, ndakagara chinyararire uye akadya kudya kicheni wangu akaisa nechipiriso changu uye sandwichkuva pamwe salami ini absentmindedly kuteerera nhau Bulletin muredhiyo.
Newscaster akataura pamusoro njodzi huru muGungwa reBaltic. Pakarepo Ndakayeuchidzwa kuti löpsedeln Ini ndaona usiku pamberi. A chikepe akanga pai, uye vanopfuura 800 vanhu vakanga vafa. Ndakatanga kuteerera vakachenjerera. Wenhau akati chikepe akanga ari munzira kwayo kubva muEstonia kuna Sweden pakati pousiku vakanga vaenda pasi mafungu egungwa.
Estonia? Asi zvakanga kuna kuEstonia, ndingadai ndakaenda parwendo rwangu? Zvino kwaivapo kuti Leif Svensson vaifamba uye ane basa rake. Akanga aronga kuti kambani hombe kuti zvaizova. Uyezve, vanenge vose Bhaibheri kirasi chikoro kuti ave.
Pfungwa dzangu dzakanga hwakakanganiswa zvakare apo Newscaster akadzokorora zita chikepe kuti yakanyura pasi pasi pevhu, "chikepe zita riri Estonia".
Pakarepo ndakanga dzirambe zvachose uye akafunga romuromo: Estonia? Kwete kuti igwa guru rainzi kuti zvaizotora nesu Estonia?
Ndakarega kutsenga kwandiri flakes uye akaisa pasi chipunu. Sandwich pamwe Dziine soseji ndisiye, uye ini akakotama mberi pane kutarira mupepanhau murwi. Pakati mapepanhau uye reklarnblad ndakatarisa kuti bhurocha nokukurumidza kuziva zita muchikepe.
Hazvina kutora nguva ndisati ariwana. Kwete pasina kutya ndakatarisa pamufananidzo pamwe hofori chikepe kuti akafamba vachizvikudza mugungwa pamwe inopupuma mafungu shure. Meso angu bata nechido nekuda muchikepe zita, iro rakanyorwa zvakajeka tsamba nhema rakakura chikepe. The chikepe pamufananidzo bhaa zvechokwadi ainzi Estonia.
Ini akatarisa bhurocha wakanaka mufananidzo. News Inzwi handina kunzwa akatowanda. Chinhu bedzi ikozvino hwaivapo mupfungwa dzangu raiva zita chikepe: Estonia. Ndakariverenga pamusoro uye pamusoro zvakare. The duku Baltic nyika adade M / S Estonia akanga yakanyura pasi. shamwari yangu Leif Svensson uye kambani yake yose yakanga kunge uri muchikepe. Uye ini ndinodawo kunge zvinobatanidzwa.
Kana ndakayeuka kuti zvakanga Estonia vakawa, toted vakasimudza mibvunzo musoro wako. Ndakagara kwenguva yakareba patafura kicheni uye akatarisa duku amateurish nokushambadzira bhurocha pamusoro rutsigiro uye zvikuru nounyanzvi bhurocha Estonia, zvino pachena avete kuBaltic pegungwa. Anenge shamisa uye zvishoma Blurred, ndakaona mabhurocha maviri apo ndaiedza kuisa pamwe mufananidzo chii chakaitika. pfungwa dzangu vakaenda Leif Svensson. Pakarepo nayo andirova kuti ndirege unodana wake, Sara. Iye haana kupinda parwendo nguva ino, sezvo iye dzimwe nguva akaita. Aiva, pakati pezvimwe zvinhu, achiteverwa Riga musi iwoyo rwendo I pane imwe nguva. Asi nguva ino, akanga asarudza kugara pamba. Ndakamutsawo yangu tsvuku akasungwa parunhare uye dialed ari 036 nhamba kuna Jonkoping.
Chete vashoma anonongedzera aigona kuitika pamberi akapindura. Probably Sara akagara uye vakatarisa foni iwoyo, nekuti akanga kunge vakawanda akadana uye vaida kunzwa zvakanga zvaitika. Leif aiva neshamwari dzakawanda uye vaiziva nzira mugove vanhu kuburikidza basa ravo. Zvirokwazvo paivawo mhuri dzakawanda vadzidzi vaida kutsvaka mamwe mashoko pamusoro vavanoda. Sara akasimbisa kuti kuEstonia aiva chikepe Leif yose bato yaiva. Saka akati mutongo iyo Handimbokanganwi:
"Asi ini handina tariro kudaro zvikuru ..."
Akanga saka hapana tariro kuti Leif yakanga yaita. Uye haana. Iye nevamwe mufundisi, Lennart Carlsson, pamwe zvikuru muBhaibheri mukirasi, vamwe mubato, uye mazana vamwe zvakaurayiwa kuti usiku mukudzika kwegungwa apo Estonia akanyura maminitsi gumi nemashanu.
Ndakafunga pamusoro chiitiko ichi zvinopfuura kamwe. Ndaigona kunge mundege Estonia. Pane zvinotevera pamwe parwendo kuEstonia, ndakasarudza kugara pamba, nekuti handina "vanonzwa" nokuti.
Mukadzi Linkoping, nenzira, ainzi Marie, akafunga kuti zvimwe chikonzero kuenda Israeri pane kuEstonia - kunyange iye pakutanga akasarudza kubatana Leif Svensson kuti rutsigiro rwendo.
Pandakazoziva kuti ndakaona kunyange zvakawanda sei kusimba Mwari akanga akatungamirira wake uye ini.
Kubva mubhuku rinonzi The wakarebesa usiku Christer Åberg rakabudiswa Semnos vaparidzi . Chapter 2: Rwendo pamwe Estonia. Pages 25-36.
Vecka 23, söndag 13 juni 2021 kl. 18:38